Ogaden News Agency (ONA) – Kulan Dhexmaray ONLF iyo Qaybo Beesha Caalamka ka mid ah.
Kulan Dhexmaray ONLF iyo Qaybo Beesha Caalamka ka mid ah.
Posted by Wariye Qaran	/ November 9, 2018
Xoghayaha Guud ee JWXO mudane C/raxmaan Sh Mahdi iyo xoghayaha arrimaha dibada ee JWXO mudane Axmed-yaasiin Sh Ibraahim ayaa maagalada Brussels ee caasimada waddanka Belgium kulamo kala duwan kula yeeshay qaybo beesha caalamka ka mid ah.
Maalinimadii Khamiista ee taariikhdu ku beegnayd 08 Nov 2018, waxay masuuliyiintu la kulmeen wakiillo ka tirsan Ururka UNPO, oo ah urur matala ummadaha aan lahayn dowlad la aqoonsan yahay, kaasoo ay JWXO xubin ka ahayd sannadihii la soo dhaafay oo dhan. Labada dhinac waxay ka wada-hadleen qaabka ay u wadashaqayn doonaan iyo kaalinta uu ururka UNPO ka qaadan karo dhiirri galinta beesha caalamka inay dadwaynaha Soomaalida Ogaadeenya gacan ku siiyaan sidii ay xuquuqdooda u heli lahaayeen.
Labada dhinac waxay ku heshiiyeen inay sii xoojiyaan wadashayayntooda, isla markaana isla markaana isla aburaan mashaariic cusub oo ku saabsan arrimaha siyaasada, daryeelka xuquuqda aadanaha iyo horumarinta bulshada.
Maalinimadii Jimcaha ee taariikhdu ahayd 09 Nov 2018, waxay masuuliyiinta JWXO la kulmeen Guddiga Arrimaha Dibada ee Midowga Yurub, oo ah guddiga ka go’aan gaadha arrimaha siyaasada, nabadgelyada iyo horumarinta ee Midowga Yurub.
Waftiga JWXO wuxuu warbixin tifatiran ka siiyay masuuliyiinta Midowga Yurub xaaladda guud ee gobolka Geeska Afrika, gaar ahaan arrimaha Ogaadeenya.
Waxay uga xog-warrameen natiijadii ka soo baxday wadahadalladii u dhexeeyay JWXO iyo Itoobiya iyo heshiiskii dhawaan lagu kala saxiixday magaalada Casmara ee waddanka Eritrea, iyo hawlaha culus ee JWXO ay ka waddo gudaha waddanka Ogaadeenya.
Intaas ka dib, labada dhinac waxay ka wada-doodeen muhimada ay leedahay in Midowga Yurub uu gacan ka gaysto sidii looga midha-dhalin lahaa heshiiska, isla markaana uu dowlada Itoobiya ku cadaadiyo inay fuliso waxyaabaha ay ballanqaaday. Waxaa sidoo kale laga wadahadlay sidii uu Midowga Yurub uga qayb qaadan lahaa dib u-dhiska waddanka Ogaadeenya, soo celinta qoxootiga iyo xallinta xurgufaha u dhexeeya qowmiyada soomaaida iyo qowmiyadaha kale iyo diiwaan galinta dambiyadii waawaynaa ee dalka ka dhacay iyo loo maarayn lahaa natiijooyinkii ka dhashay.
Masuuliyiinta Midowga Yurub ayaa iyaguna dhinacooda ka mahad celiyay booqashada waftiga JWXO, waxayna ballanqaadeen inay mashaariic waawayn ka fulin donaan Ogaadeenya, iyagoo si wayn u soo dhaweeyay talooyinkii uu waftiga JWXO u soo jeediyay.